2 Araka ny hita ao amin'ny Baiboly
Avy amin'ny anarana hebreo hoe כְּפַר נַחוּם / Kəfar Nāḥūm na Kfar Naḥūm ny anarana nogasina hoe Kafarnahoma. Atao ho Tell Naḥūm koa ny anaran'ilay tanàna amin'ny teny hebreo. Ny teny hoe Kfar dia midika hoe "tanàna kely" ary ny hoe Nahum dia "fiononana" na "fitserana". Midika hoe "tananan'ny mpampionona" ny hoe Kfar Nahum. Mety misy ifandraisany amin'ny mpaminany Nahoma izay avy tao amin'ny tanàna atao hoe Elkoshé midika hoe "tanàna kelin'ny mpampionona". Amin'ny teny arabo, i Kafarnahoma dia atao hoe Talhum, ka ny hoe tell dia midika hoe "havoana" ary ny Hum dia mety fanafohezana ny hoe Nahum.
Ao amin'ny asa soratr'i Flavio Josefa dia voasoratra amin'ny teny grika hoe Kαφαρναούμ / Kapharnaum (Tzaferis, 1989) sy Κεφαρνωκόν / Kepharnōkon ilay anarana. Ao amin'ny Testamenta Vaovao izy dia voasorara amin'ny teny grika hoe Kαφαρναούμ / Kapharnaum amin'ny soratanana sasany fa Kαπερναούμ / Kapernaum kosa amin'ny sasany. Ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy dia nanakaiky ny voalohany (Kafarnahoma) fa ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy kosa dia nandray ny faharoa (Kapernaoma).
Araka ny hita ao amin'ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny fotoana nisehoan'ny tantara ao amin'ny Filazantsara (na Evanjely), dia nisy fadin-tseranana sy antoko-miaramila romana teo ambany fibaikoan'ny mpifehy iray i Kafarnahoma; izany dia manazava kokoa ny fisian'ny apostoly Levy na Matio, izay mety nanana trano fiasana tao hakany hetra amin'ny mpanjono sy ny mpivarotra eo an-tsisintany. Voasoratra in'enina ambin'ny folo (16) ao aminan'ireo Filazantsara i Kafarnahoma, ka laharana faharoa izy amin'izany aorian'i Jerosalema . Samy miresaka an'i Kafarnahoma avokoa ny Vaovao Mahafaly efatra.
Voalaza ho akaikin'ny tanànan'i Petera sy i Andrea ary i Joany sady tanànan'i Matio mpamory hetra i Kafarnaomy (Mat. 4.13; 8.5; 11.23; 17.24; Mar. 1.21; 2.1; 9.33; Lio. 4.23, 31; 7.1; 10.15; Jao. 2.12; 4.46; 6.17, 24, 59).
Indray sabata i Jesosy dia niresaka tao amin'ny sinagoga tao Kafarnahoma sady nanasitrana lehilahy izay nisy fanahy maloto (demonia) (Lio. 4.31-36 ; Mar. 1.21-28). Tao koa no nanasitranany ny rafozam-bavin'i Simona Petera (Lio. 4.38-39). Tao no nanasitranany ny mpanompon'ny manamboninahitra Romana iray izay niantso vonjy taminy (Lio. 7.1-10; Mat. 8.5). Tao no nanasitranan'i Jesosy ilay olona malemy nampidirina avy ao amin'ny tafon-trano (Mar. 2.1-12; Lio. 5.17-26).
Araka ny hita ao amin'ny Evanjely sinoptika dia nisafidy an'i Kafarnahoma hanaovany ny asa fanompoany betsaka tao Galilea aorian'ny tanana kely atao hoe Nazareta i Jesosy (Mat. 4.12-17). Nanozona an'i Kafarnahoma anefa izy noho ny tsy finoan'ny mponina tao ny maha Mesia azy (Mat. 11.23).
Ny toerana nisy ny tanàna dia efa nisy olona tamin'ny taonarivo faha-3 tal. J.K. tamin'ny Andron'ny Alimo. Foana io toerana io tamin'ny Andron'ny Vy ary tsy nisy mponina indray raha tsy tamin'ny taonjato faha-5 tal. J.K. Niorina tamin'ny andron'ny fanjakana hasmoneana tao Jodea (na Jodia) ny tanàna. Manaporofo izany ny fahitana vola antitra indrindra teo amin'ny toerana niorenan'ny tanàna voalohany, dia vola tany amin'ny taonjato faha-2 tal. J.K. Teo amin'ny sisintanin'i Galilea, teo amin'ny sampany iray amin'ny lalan'ny raharaham-barotra atao hoe Via Maris ("Lanan'ny Ranomasina").
Tanànan'ny mpanjono sy ny tantsaha i Kafarnahoma izay nisy mponina tsy nihoatra ny 1 000. I Betsaida, izay tanàna kely teo akaikin'i Kafarnahoma teo amoron'ny farihin'i Tiberiada, nefa miorina teny an-dafin'i Jordana, dia lazaina ao amin'ny Testamenta Vaovao fa tanàna nipoiran'i Petera sy i Andrea rahalahiny ary i Filipo ary mety misy fifandraisany amin'i Natanaela.
Tamin'ny taonjato faha-2, taorian'ny nandravana ny tanànan'i Jerosalema sy ny nandraràna ny Jiosy rehetra tsy hiditra ao, dia nisy Jiosy nazoreana sy mpanao taozavatra avy amin'ny Empira bizantina tao Kafarnahoma. Nisy mponina miisa tokony ho 1 500 tao tamin'ny taonjato faha-5. Nisy fiangonana bizantina tao izay niorina teo amin'ny sisam-paharavan'ny atao hoe "ny tranonin'i Md Petera".
Ny tanàna kely izay simban'ny horohorontany tamin'ny taona 746 ka efa namborina indray somary lavidavitra eny dia niha nihena laza ka navelan'ny olona nandritra ny taonjato faha-11. Nanana ny lazany i Kafarnahoma nefa tsy ahitana sisan-javatra naorina tamin'ny fandalovan'ireo Kroazada (na Krosada).
Hitan'ilay Amerikana manampahaizana momba ny jeografian'ny Baiboly, Edward Robinson, tamin'ny taona 1838 ny toerana niorenan'ny tanana fahizay. Tamin'ny taona 1866, ny mpanao sarin-tany, Charles Wilson, dia nahita ny sisam-paharavan'ny sinagoga, ary tamin'ny 1894, ny ampahany amin'ny toerana nisy ny tanàna tany aloha dia novidin'ny Zana-paritanin'ny Tany Masina (latina: Custodia Terræ Sanctæ) izay an'ireo Fransiskana. Natao teo anelanelan'ny taona 1968 sy 1984 ny fihadian'ny arkeologa ny toerana. Nisy fihadiana natao koa tamin'ny toerana nisy ny tanàna, tandrifin'ny an'ny Ortodoksa grika, teo anelanelan'ny taona 1978 sy 1982.
Mbola ao manadraka ankehitriny ny sisan'ny tanànan'i Kafarnahoma taloha, ka ahitana:
ny sisan'ny sinagoga lehibe tamin'ny vanim-potoana bizantina;
ny tranon'i Petera izay ahitana eo amboniny ny eglizy katolika moderna iray;
ny eglizy grika ortodoksan'ny Apostoly fito izay naorina tamin'ny taona 1931 eo amin'ny toerana nanorenana indray ny tanànanan'i Kafarnahoma taorian'ny horohorontanin'ny taona 746;
hita eo amin'ny fidirana amin'ilay toerana ny tranon'ny fikambanan'ireo Fransiskana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kafarnahoma&oldid=979080"
Voaova farany tamin'ny 6 Janoary 2020 amin'ny 03:20 ity pejy ity.